Kungaqhuma Kubasiwe by LL Ngewu - Read Online
by LL Ngewu
110 pages53 minutes
UKungaqhuma Kubasiwe yingqokelela yezincoko zesiXhosa. Lo mbhali usebenzisa ubuciko noburharha bakhe ukuvelisa iimfihlelo zobomi. Mve xa athi ikhaya lakhiwa kulilwa, isifo sephepha sinxulumene noku oluka, iinkuni zokupheka ulutsha lungaphasalaki njengesonka esingavuthwanga zikhona, kukho nkalo ithile ingekavelelwa ngesigwebo sentambo kwaye ubuciko yiqhoni yentuthuzelo kwabaxhwalekileyo Zivele, zininzi iimfihlelo eziveliswa ngulo mbhali!
Publisher: Via AfrikaReleased: Sep 18, 2017ISBN: 1415452520Format: book
Ithunga lizala ngumphehlulu
Ilifa Yingcambu Yesono
Qula Kwedini Kabawo
Iliwa libhek’ umoya
Owu! Hayi Ukuzenza
Kungaqhuma Kubasiwe - LL Ngewu
Kubantu abababazwa ngokungazibandezi nokuba sekubanda kangakanani na ndibamba ngazibini kubo ndisithi ukwanda kwaliwa ngumthakathi owayethandwa kunene eThembeni. Uhambo ngalunye umntu aluthatha ngothakazelelo lunokumenza umntu ethe amandla xa kungekho abo bamkhuthazayo. Ndibulela kakhulu ngenkxaso endiyifumene kwiSebe leelwimi zase-Afrika kwiDyunivesithi yaseTranskei ngokungakumbi kumnumzana uPhumzile, ityendye lakwaSotashe. Andinakumlibala unkosazana uMxakaxa naye ongakhange adinwe kukuziduba ngokufunda ngocoselelo lo msebenzi ubusoloko ungumsina-ndozele. Kuni nina bantwana bam uFuneka, uThembinkosi, nethunjana u-Unathi ndinethemba lokuba nakuzipha ithuba nincokole ngokuphangaleleyo ngezi zimvo nabelane ngesisa ngazo ningasoloko nixhuthana okwamaxhuthantambo nizizantanta ngezinto ezingenamsebenzi.
Ndiyinikela le ncwadi kubo bonke abantu abantsundu abazingcayo ngobuzwe babo.
Umntu wakwaZulu uthi akudibana nento embi eyenziwe ngabanye abantu beyenza kwabanye akhuze angayeki athi, Onembeza bala babantu abasaphilile ngempela, habe! Angatsho umntu wakwaZulu ubokuqonda ukuba iliwa libhek’umoya. Ophulaphuleyo angamangaliswa ukuba kwathethwa ngenembe nje ukutya kwabantwana kwenzekeni na kanti konakele yaye umonakalo ungenakulinganiswa nanto. Umntu wakwaZulu ekhuza nje ukhuziswa yinto ehlasimlisa umzimba itsho igazi lihlobe. Into yokuphalala kwegazi labantu ngaphandle kwesizathu okanye ke ngesizathwana nje esi-yimfitshi-mfitshi yenza ukuba umntu abone ukuba isazela siphelile kwabanye abantu. Enye yezinto umntu ekufuneka zingamlahlekanga apha ebomini sisazela. Isazela ayingomanzi yona nto ikhiwa emthonjeni. Isazela siyamakha umntu. Isazela siyamqokelela umntu simbumbe abe ligugu kwabazalana naye. Sakufa isazela emntwini umfelwa lowo akasenakubalelwa kubantu benene.
Isazela lilizwielivakala bunkente-nkente emntwini limnqanda ukuba angangeni kwimikhwa nemikhuba ekhohlakeleyo. Umntu ngamnye ukhula enesazela esimxelelayo ngalo lonke ixesha into elungileyo kanti nento engamkelekanga eluntwini. Isazela asifani nondlebende ongenasali inkwenkwe etyiwula ithi cwaa kuye ize itsibe yakuthanda ingenzanga nelimdaka ilizwi lombulelo. Isazela asifani nebhayisekile umntu ayinyova athi apho adinwe khona ayilahle phaya. Isazela akusililo izembe lokugawula, lona umntu alikhumbula mhla kuyiwa ehlathini.
Akakho umntu olawula isazela sakhe koko isazela yinkosi yomntu yaye abantu bengabantu nje kungenxa yokuzingisa ukululamela ngobulali nangokuzeleyo izazela zabo. Ungamva umntu xa ecengwa ukuba angene kwintoengavumelaniyo negazi lakhe esithi, Isazela sam asindivumeli ukuba ndiyenze into enjalo . Umntu owalelwa sisazela sakhe ukuba angayenzi into ethile loo mntu uyaphila. Umntu osabelayo akubizwa lilizwi elingaphakathi kuye ngumntu loo nto. Kuyenzeka umntu azibone sel’ eqweqwediswa engalindelanga angxixhwe ngezimvo angazihlalutyanga axelelwe ukuba makenze isigqibo esimqa-mangelayo esikhawulezileyo. Umntu oyihloniphileyo noyilu-lameleyo inkosi yakhe ufanele ukungxengxeza acele ukunikwa ithuba lokusihlafuna asetyise isicelo eso. Le yindlela yokuba umntu afumane ukuphula-phula kakuhle isazela sakhe.
Abanye abantu abagil’ imikhuba bakwenza oko bengathandi bebethwe nje kukwehliw’entloko bengalindelanga. Umntu ofundekelwa ngabantu abaneenjongo ezityhulu angazibona naye sele ezicandel’umgala-gala engalindelanga kuba ephetshethwe ngamawexu-wexu. Abantu abenza izinto ezihlasimlisa umzimba asingabo bonke abangena kuloo mgibe ngokuzithandela. Le ke asiyiyo indlela yokukhusela izaphuli-mthetho koko yindlela yokukhumbuza ukuba umntu angaziphos’ eliweni elibona kuba ebhudlwa ngumoya wesibaya.
Bakhona ke abazikhohlisa ngelithi izazela zabo zilawulwa ngabo. Umntu akusilawula isazela sakhe uyazenzakalisa. Isazela asiyodyasi yemvula umntu ayikhumbula lakuhlom’izulu, koko isazela yinto ekufuneka umntu esoloko ephantsi kweempembelelo zayo. Isazela esi siyafana nale nto eyenza umntu emntwini. Akakho umntu onguye onokumana ebayihagu kwiimeko ezifuna iihagu okanye akhonkothe xa kungekho nja. Umntu ngumntu ngalo lonke ixesha. Isazela asikwazi ukumntlokothisa umntu azibone sel’esenza izinto ezichaseneyo nobulungisa.
Umntu ngamnye uzalwa enesazela esiye sikhula nokukhula kwakhe. Iyenzeka into yokuba njengokuba umntu eya ekhula nje angasithobeli isazela sakhe. Uyakwazi umntu ukuya ekhula kanti sona isazela sakhe siya sidodobala okomntwana osisidodo. Ungambona umntu esisigantsontso sendoda esibalasele ngeziphika neziquluba kanti uphelele kwezo ziquluba aqobisa ngazo kodwa kwicala lobuntu benene akangomntu ngandawo. Isazela sidodobala side sife. Ukufa kwesazela emntwini kuthabatha ixesha yaye lowo ufelwe sisazela uyakwazi ukwenza into embi bade babuze abanye abantu ukuba besekutheni na. Abo babuzayo babona ukuphelelwa komntu sisazela. Ingaba zizinto zini ezibonakalisa ukuba umntu uya esonakala ngokungaphula-phuli isazela sakhe?
Isazela singaqalisa ukufa umntu eselula. Umntwana oselula angayikhanyela into ayenzileyo kuba esoyika uswazi. Loo mntwana obaleka isohlwayo ngesenzo sakhe uzifaka kwesiqatha sona esi isohlwayo esisisazela sakhe. Angakwazi ukukhanyela asinde eluswazini kanti uyangcungcutheka umntu apha ngaphakathi. Umntwana obalaseleyo ekukhanyeleni izinto azenzileyo ubulala isazela sakhe kancinci. Lo uqala ngokukhanyela izinto ezincinane ngobuqili ulindelwe kukukhanyela eseziqatha zona ezi izinto.
Omnye umntwana angangenwa ngumkhwa wokumana esiba ubugcwabalalana bemali kubazali bakhe. Mhla eqala lo mkhuba isazela sakhe siyamnqanda kodwa angasilulameli. Umntwana onjalo akawenzi izihlandlo ezininzi lo mkhuba phambi kokuba abe lisela elivunyiweyo lemali ekhayeni lakhe. Emva kwexesha akoneli yile ayiba kowabo imali koko ugqithela nakwimali yemizi andwendwela kuyo. Umntwana onje ulisela elisendleleni eya esiseleni apho onke amasela achitha khona ikhefu xa akwiholide yobusela. Abantu abaziyo bathi imali iyachewula kanti asiyomali echewulayo koko bubusela kuba lo uqala ngokumana esiba imali ugqithela nakwezinkulu izinto. Ukuba ufike emzini konekwe impahla elucingweni uqokelela kwanto engenziwa kukuba eyithanda loo mpahla koko kukuba sel’ esisicaka sobusela, elivunyiweyo lona eli ichathaza elinyawo mbini.
Umntwana oye esondela ebuseleni uyakwazi